Trump oo ku goodiyey inuu xaalad deg deg ah soo rogi doono • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Trump oo ku goodiyey inuu xaalad deg deg ah soo rogi doono
Trump oo ku goodiyey inuu xaalad deg deg ah soo rogi doono
January 7, 2019 - By: Khalid Yusuf
Waxaan weli xal loo helin miisaaniyada dowlada Maraykanka kadib dooda ka dhalatay dhaqaalaha uu doonayo Trump inuu ku dhiso darbiga uu sheegay inuu ku xiri doono xaduuda dalkaasi la wadaago Mexico.
Trump ayaa codsanaya in lacag gaareysa 5.6 bilyan oo dollar loogu daro Miisaaniyada sanadkan si loo dhiso darbiga uu doonayo, arrintaasi oo ay diideen Xildhibaanada mucaaridka ah ee xisbiga Dimuquraadiga ee la wareegay aqlabiyada Aqalka hoose ee wadankaasi.
Murrankan miisaaniyada ayaa keenay in iridaha loo laabo qeybo badan oo kamid ah xarumaha dowlada Maraykanka, halka tiro gaareysa 800-kun oo shaqaalaha dowlada u baqayaan mushaharkooda oo aan weli la bixin.
Donald Trump ayaa ku goodiyey inuu xaalad deg deg ah kusoo rogi doono xaduuda Koonfureed ee dalkaasi taasi oo awood dheeraad ah u siineysa inuu xiro xaduuda, hadii xal loo heli waayo murranka miisaaniyada. Xisbiga Dimuquraadiga ayaa dhankiisa sheegay in Trump haduu arrintaasi ku dhaqaaqo ay la tiigsan doonaan Maxkamada.
Inta badan shacabka Maraykanka ayaa aaminsan in murrankan miisaaniyada uu dhaawac weyn ku keeni doono dowlada Maraykanka, halka Trump uu doonayo inuu ka dhabeeyo balanqaadkiisii ahaa inuu dhisi doono darbiga Xaduuda kahor intaan la gaarin doorashada soo socota ee 2020 oo uu doonayo inuu dib isu sharaxo.